Guddoomiye ku-xigeenka Aqalka Sare oo ka hadlay Dacwada Xisbiga Himilo Qaran – Idil News
Guddoomiye ku-xigeenka Aqalka Sare oo ka hadlay Dacwada Xisbiga Himilo Qaran
Posted By: Jibril Qoobey October 11, 2019
Guddoomiye kuxigeenka 1aad ee Aqalka Sare Abshir Bukhaari ayaa ku tilmaamay go’aan dowladnimo tallaabadii Xisbiga Himilo Qaran ay dacwad uga gudbiyeen Dowladda, si ay cadaaladda u tiigsadaan.
Qoraal uu soo dhigay bartiisa Facbeook ayuu kaga hadlay sareynta sharciga iyo in haddii la dhaqan geliyo shuruucda dalka in la gaari karo kala dambeyn iyo sharci ku dhisan cadaalad bulsho oo la isku haleyn karo.
Halkan hoose ka akhriso qoraalka Abshir Bukhaari.
Dalkeenna wuxuu leeyahay shuruuc hadii sida ay yihiin loo dhaqangeliyo la gaari karo kala-dambayn sharci ku dhisan & cadaalad bulsho oo la isku halayn karo. Sida ay taariikhdu diiwaan gelisay waayihii dawladihii rayidka ahaa keliya ayaan qofna ka sareyn sharciga.
Runtii waxaa dawladnimo ah go’aanka Xisbiga Himilo Qaran ay dacwad uga gudbiyeen Dawladda si ay caddaaladda ula tiigsadaan go’aankii Dawladdu ugu diiday madaxweynihii hore Mudane Shariif Sheekh Axmad in uu duulimaad ku tago Magaalada Kismaayo, caasimadda KMG ah ee Jubaland.
Sida uu qabo Qod.10aad (4) ee Xeerka Nidaamka Garsoorka, dacwadda uu xisbigu ka gudbiyay Dawladda waxay ka mid tahay dacwadaha maamulka. Dhammaan cabashooyinka ku saabsan go’aannada maamul ee Dowladda waxaa loo gudbiyaa Maxkamadda Sare ee Dalka.
Go’aankan wuxuu si cad u muujinayaa biseylka siyaasadeed, dhaqanka dowladnimo iyo u-hoggaasanaanta sharciga oo ah rajo cusub oo ka muuqata habdhaqanka SIYAASIGA #Soomaaliyeed EE AAN XILKA HAYN. Go’aankan wuxuu ka mudan yahay saamileyda siyaasadeed ee Soomaaliya ku dayasho iyo in isha lagu wada hayo sida ay laanta garsoorku u maareyso dacwadan oo ku ah tijaabo culus oo cadeyn doonta sida & heerka lagu kalsoonaan karo. Sida waafaqsan Qod.1aad (2), Qod.4aad (1), Qod.11aad (1), iyo Qod.33aad ee #Dastuurka KMG ah SHARCIGA ayaa haga Dadka & Dowlada.
Garsoorku waxa uu ka madaxbannaan yahay laamaha dawladda ee Sharci-dejinta iyo Fulinta marka ay gudanayaan xilkooda. Xubnaha garsoorku waxa ay u hogaansamayaan oo keliya Sharciga sida ku cad Qod.106aad(1) ee Dastuurka KMG.